Iphupha lokulahla Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukurhoxa kuthetha ukurhoxa emsebenzini, isikhundla, okanye isikhundla. Umntu uyeka isikhundla ngokuzithandela kwaye abuyele kwicandelo elitsha lomsebenzi okanye athathe umhlala phantsi kubomi babucala. Nabani na othimbe umntu enze into ebalulekileyo kwezentlalo okanye kwezopolitiko: njengo-dolophu, umphathiswa, umongameli okanye inkosi. Emva kokurhoxa emsebenzini, kuyaqala into entsha, nokuba ngumceli mngeni onomdla ngakumbi, kodwa mhlawumbi ubonakalise nobomi "bokwenyani" kude nokukhanya.
Nangona kunjalo, abanye abayeki emsebenzini ngokuzithandela, kodwa basebenza phantsi koxinzelelo lwabanye. Isenokungafikeleli kulindelo olubekwe kuyo okanye inokhuphiswano. Okanye mhlawumbi ukuthinjwa kuthetha ukuba ixesha lilungile lotshintsho.
Ukuba umntu uphupha ukuthotywa, iimvakalelo umntu azive ephupheni zidlala indima ebalulekileyo. Ngaba uyarhoxa kweso sikhundla ngokuzithandela? Ngaba uziva ukruqukile okanye ukhathazwa yile misebenzi ingasentla? Ngaba ujonge phambili kumzuzu emva kokuthinjwa kwakho ngoncedo, uloyiko, okanye umdla? Ukutolikwa kwephupha kunika iimpendulo ezahlukeneyo koku.
1 Uphawu lwephupha «ukuthotywa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuthotywa» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuthotywa» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuthotywa» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na ozibamba, uyehla ekutolikeni kwephupha letrone yakhe kwaye abuyele kwindawo yenyani. Ngokunokwenzeka ukuphupha kuyaqonda ukuba usekuvukeni kobomi. Ulahlekiso uncamile. Uyibonile into ephupheni njengokuyenza mhlophe kwaye ukulungele ukwahlukana nayo. Ukuba ukulindelwa kwamabhongo kunxulunyaniswa nesimboli yephupha 'yokuthotywa', isenokuba sisalathiso senkqubela phambili yomsebenzi kunye nophuhliso lomsebenzi olungileyo. Carrera yiba ngokubanzi. Ukuba umphuphi uva ukurhoxa kwabanye, kusenokubakho iingxaki ngaphambili.
Ukuba umntu uyeka iposi okanye iofisi ephupheni, uphawu lwephupha "ukuthotywa" lukwaluphawu lweendlela ezintsha ekufuneka zihanjisiwe kwaye zihlolwe. Ukutolikwa kwamaphupha, ukuyeka emsebenzini kukwathetha a Tshintsha ebomini, kunye nokuvalelisa kwimikhwa yobomi bangaphambili. Ukuphupha kufuneka kuthathele ingqalelo eyona nto ibalulekileyo kuye kwaye kugxile kuyo. Kubalulekile Cinga ngobomi bakho.
Uphawu lwephupha «ukuthotywa» - ukutolikwa kwengqondo
I-subconscious ikhokela umphuphi, ophupha ngokuyekisa, ebusweni besidingo sokujongana nenyani: akufuneki azikhohlise yena buqu. Jongana nezibakala. Ukutolikwa kwamaphupha, emva kwephupha lokuyekisa unokufihla uloyiko lokwenza into engalunganga, yokungathobeli amabango kunye neemfuno. Buyela ephupheni kuba unayo uxinzelelo lwengqondo ayisakhuli. Ukuthinjwa kunokuba luncedo ekutolikeni amaphupha ukuba umntu ushiya iindlela ezindala kwaye endaweni yoko athathe iindlela ezintsha ezihlangabezana ngcono neemfuno zakhe.
Isimboli sephupha "ukuthintela" inxulumene ngokusondeleyo nezikhundla eziphezulu kunye nezidima. Ekuchazeni iphupha, isimo sengqondo sephupha sibonakaliswa kulo mfanekiso wephupha. Impembelelo namandla ngokuchaseneyo. Nabani na othintela ephupheni ubonisa ngesikhundla sakhe esibalulekileyo ukuba ukulungele ukuthatha uxanduva kwaye enze izigqibo ezibalulekileyo. Ngokurhoxa emsebenzini, uphawu lwephupha "ukuthintela" imiqondiso ngelixa uphupha ngaxeshanye ukuba uzityebise ngamanye amaxesha kwaye kufuneka uzijonge ngokugxekayo.
Uphawu lwephupha «ukuthotywa» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha kuyaluqonda uphawu lophupha "ukuthotywa" kwinqanaba lokomoya njengesicelo sokuphupha, uku Unabwendbaren ukoyisa. Ukukhulula imikhosi yokomoya, kuya kufuneka uyeke yonke into engabalulekanga kwaye uyeke umzabalazo wemihla ngemihla.